January 10, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 10th, 2017'
January 10, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay xasillooni darro siyaasadeed oo xiligaan ka dhacada degaanada maamul Goboleedka Galmudug oo horumar ku tallaabsaday mudada uu jiro. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan xiligaan la aqbali karin khalalaase siyaasadeed ee u dhaxayeeya Xildhibanaada iyo Madaxda maamul Gobolleedka Galmudug, iyada oo la …
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo Xaalad Deg Deg ah ku soo Rogay Deegaanada Galmudug (Akhriso)
January 10, 2017 – Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug C/kariin Xuseen ayaa xaalad deg deg ah ku soo rogay degaanada hoos taga maamulkaasi ka dib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. C/kariin Guuleed ayaa wareegtada u cuskaday qodobo ka xusan dastuurka maamulkaasi oo quseeya amniga iyo siyaasadda degaanada Galmudug. “Si dib loogu soo celiyo arrimaha amaanka iyo …
Wiil si Qaxootinimo ah Ugu Noolaa Xereda Dhadhaab oo Noqday Xildhibaan Kamid ah Baarlamaanka Federaalka (VIDEO)
January 10, 2017 – Wiilkan oo lagu Magacaabo Cabdulaahi Sheekh Cabaas oo 31 jir ah ayaa waxa uu dalka Kenya tegey Isaga oo 6-sano jir ah markii dalka Soomaaliya ay ka bilaawdeen dagaaladii sokeeye. Cabdulaahi ayaa dugsiga hoose iyo kan dhexe ku dhigtay kaamka qaxootiga ee Dhadhaab, waxana uu Jaamacad kaga soo baxay magaalada Nairobi …
January 10, 2017 – Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay sharci darro tahay fadhigii xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay maanta ku yeesheen magaalada Cadaado, kaas oo uu sheegay inay isaga xilka uga qaadeen. Xildhibaanada maanta fadhiistay oo gaaraya illaa 54 mudane, ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiye ku xigeenka baarlamanka Galmudug, iyadoo Guddoomiyihii uu …
Xildhibaanada Maamulka Galmudug oo Xilkii Madaxweyne ka Qaaday C/Kariin Xuseen Guuleed (Dhagayso)
January 10, 2017 – Xildhibaanada Baarlamaanka Maamul Goboleedka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inay xilkii ka qaadeen Madaxweynaha Maamulka Galmudug mudane, C/kariin Xuseen Guuleed. Xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa kulan ay saakay ku yeesheen magaalada Cadaado waxay ku codeeyeen inay kalsoonidii kala laabteen Madaxweynaha Galmudug, gudoonkana ayaa sheegay in 54-Xildhibaan ay codeeyeen gabigoodna ay Ogolaadeen in xilka …
Guushii Xil.Cabdulaahi Sheekh Cabaas (VIDEO)
Cabdulaahi ayaa dugsiga hoose iyo kan dhexe ku dhigtay kaamka qaxootiga ee Dhadhaab, waxana uu Jaamacad kaga soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdulaahi Sheekh Cabaas ayaa sheegay inuu dalka Soomaaliya ku soo laabtay sanadkii 2011, iyadoo markaasi dalka ay ka jirtay abaar aad u daran oo dad iyo duunyaba galaafatay.
Qaybta Labaad Waraysigii Cali Dheere (VIDEO)
Cali dheere ayaa wariyaha waraysigani ku siiyaya deegaano hoostaga magaalada Jowhar oo ay ku suganyihiin dagaalyahanno ka amarqaata ururka Al Shabaab. DAAWO: RIIX Halkan Qaybtii 1-aad Wariyihii waraysiga ka soo qaaday afhayeenka Al Shabaab ayaa waxaa markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa qabtay oo xiray ciidamada dowladda, iyadoo markii danbe la sii daayay.
Xildhibaanada Maamulka Ahlu Sunna oo Lagu Dhaariyay Magaalada Dhuusa-Mareeb (SAWIRRO)
January 10, 2017 – Xildhibaanada cusub ee uu yeelanayo Maamulka ay dhisteen Ururka Ahlusunna ayaa waxaa lagu dhaariyay Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada maamulka Galmudug. Shalay ayay aheyd markii ay yeesheen Baarlamaan cusub, kadib kulan ka dhacay Magaalada Dhuusa-mareeb ee Gobolka Galgaduud. Magacaabista xildhibaanadan ayaa waxa ay ku timid qaab xulitaan ah, kadib waxaa xildhibaanadani qaab …